Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Tani waa Us
Guji dhacdooyinka bishaan ee Degmada Jackson!
La soco wixii ku cusub Degmada Jackson.
Riix halkan si aad u aragto Xafladaha & Dhacdooyinka.
Xafladaheena & Dhacdooyinka
Eeg dhammaan dhacdooyinka gaarka ah adoo dooranaya taariikh kalandarka ama adigoo gujinaya baarka cas ee liis buuxa.
tacabirka ayaa bilaabmaya
Degmada Jackson, IN
Meelo badan oo madadaalada dibadda ah iyo nashaadyada saaxiibtinimo ee qoyska, booqdayaashu waxay heli karaan waxqabadyo kala duwan iyagoo nagala soo xiriiraya Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson. Samaynta safar sahlan qaab kasta, waxaanu nahay saacad koonfurta Indianapolis, saacad waqooyiga Louisville, KY, saacad ka Cincinnati, OH, iyo hop-skip-iyo-boodboodka Bloomington iyo Nashville, Indiana. Kaliya ka bixi Exit 50 oo ka baxsan Interstate 65 oo kaalay na arag. Diyaarintayada balaadhan ee dhacdooyinka saaxiibtinimo ee qoyska iyo ciidaha, waxay kuu sahlaysaa inaad abuurto waqtiyo aan la ilaawi karin. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad naga dhigto dhammaan macluumaadka aad u baahan karto si aad u qorshayso tacaburkaaga soo socda ee Degmada Jackson, Indiana. Halkan guji si aad uhesho hage yar oo kusocda Dagmada Jackson!
La dhigay 1850kii, bulshadan yar waxay ku faantaa dhaxalkeeda. Ku fadhiista waddooyinka gobolka 58 iyo 135, waxaad ka soo socon kartaa Matxafka Freetown-Pershing, oo ah hoyga khasnado badan oo ay ku jiraan mid ka mid ah 7 Jackson County bison, dukaanka jalaatada ama Sgt. Rick's American Cafe iyo BBQ. U sahamin baadiyaha quruxda badan Khamriga Salt Creek oo dhadhamso khamrigooda abaalmarinta ku guuleysta adoo qaadanaya muuqaal muuqaal qurux badan.
Beeshani waxay u dabaaldegaysaa inay tahay kursiga degmada oo hoy u ah taariikh taariikhi ah iyadoo maxkamadda gobolka ay tahay mattaalka dhammaan goobaha taariikhiga ah ee bulshada oo dhan iyo gobolka ku xeeran. Bulshadu waxay ku raaxeysataa inay hoy u tahay abaalmarinta Bandhigga Degmada Jackson. Brownstown waxay ku fadhidaa US50, kaas oo ah wado wayn oo xeeb ilaa xeeb ah iyo laami wayn oo bari iyo galbeed u sii mara. Markaad dhex fadhido buuraha quruxda badan ee kaynta Gobolka Jackson-Washington iyo Hoosier National Forest, waxay 10 daqiiqo kaliya u jirtaa I-65.
Kaliya si dhakhso ah uga boodboodida I-65 iyo US 31, Crothersville waxay hoy u tahay Tigers-kooda ay ku faanto oo sanadle ah Casaanka, Caddaanka iyo Buluugga. Bandhiga ayaa lagu xusayaa waddaniyadda iyo calanka Maraykanka. Markii ugu horreysay waxay dhacday 1976 markii Maraykanku u dabaaldegay labadii sano ee la soo dhaafay. Hamacher Hall waxa uu door ku leeyahay wadnaha bulshadan horumaraysa . Munaasabado badan oo bulshada iyo masraxa casho ee marmar ah ayaa lagu raaxaysan karaa goobtan taariikhiga ah. Makhaayado iyo dukaamo ayaa lagu basbaday, kani waa lammaaneyada koonfureed ee soo dhawaynta Degmada Jackson.
Seymour waxaa si fudud looga gali karaa Exit 50 I-65, US 50, US 31 iyo Indiana 11. Meedy W. Shields iyo xaaskiisa Eliza P. Shields waxay isdiiwaangeliyeen saxanka magaalada Seymour Abriil 27, 1852. Seymour si dhakhso leh ayuu u koray ku darista Wadada Tareenka ee Ohio iyo Mississippi sanadkii 1854 waxayna si dhaqso ah u noqotay magaalada ugu weyn degmada Jackson. Seymour waxay bixisaa warshado, dukaamaysiga, hoyga, cuntada iyo xafladaha waaweyn iyo dhacdooyinka, oo ay ku jiraan Seymour Oktoberfest, kaas oo xushmeeya dhaxalka Jarmalka ee Degmada Jackson. Rock'n Roll Hall of Fame inductee John Mellencamp wuxuu ku dhashay Seymour, booqdayaashu waxay sahamin karaan astaamo badan oo bulshada dhexdeeda ah. Seymour sidoo kale waa goobtii ugu horraysay ee adduunka laga dhaco tareenka oo ay geysteen Reno Gang oo maxalli ah. Daawo muuqaalka sheekada oo guji halkaan. Badhtamaha badhtamaha weyn wuxuu bixiyaa fursado badan oo kala duwan laakiin ma lumiyo dareenka magaaladaas yar.
Medora waxay ku taal cidhifka koonfur-galbeed ee Gobolka Jackson waxayna bixisaa aragtiyo xiiso leh iyo dareenka magaalada yar. Jooji buundada ugu dheer ee saddexda taako ee daboolan ee Maraykanka, oo ku taal Indiana 235 ama arag Medora Brick Plant. Saaxiibada Medora Covered Bridge waxay abaabulaan Casho sannadle ah oo ku saabsan buundada, taas oo ah khibrad cunto oo gaar ah oo ku taal buundada marka lagu daro xaraashka aamusnaanta iyo madadaalada. Riix halkan si aad u akhrido cashada Medora waa astaanta martigelinta taasina waxay muuqataa inta lagu jiro xilliga Xaflada Medora Goes Pink bisha Oktoobar ama Xafladda Kirismaska ​​ee Medora bishii Diseembar. Medora waxaa laga heli karaa US 50 ama Indiana 235.
Vallonia wuxuu ahaa degsiimihii ugu horreeyay ee degmada Jackson oo xitaa u ordayay inuu noqdo kaaliyaha ugu horreeya ee gobolka. Vallonia waxay ku taal banaanka kursiga degmada waxaana laga heli karaa Indiana 135. Fort Vallonia waa xusuusin taariikhda Vallonia horaantii 1800s waxayna nooshahay Oktoobar inta lagu jiro Dabaaldegga Maalmaha Fort Vallonia. Buuraha iyo burooyinka ayaa laga arki karaa Vallonia iyo dhowr suuq oo beeraha ah wax soo saarna waxaa laga heli karaa agagaarka aagga, kaas oo caan ku ah cantaloupe macaan iyo qaraha.
sahamiyaan taariikhda Gobolka Jackson
Mid ka mid ah soojiidashadayadii ugu waaweynaa muddo ka badan 60 sano ayaa ahayd Waddada Xawaaraha ee Brownstown, oo ku taal Jackson County Fairgrounds. Jinsiyadaha waxaa lagu qabtaa sideed bilood sanadka marka lagu socdo wadada wasakhda ah, waxaanan bixinnaa fasalo kala duwan. Soo-booqdeyaashu sidoo kale waxay ka baari karaan taariikhda degmada Jackson mid ka mid ah lixda madxaf ee ay ka mid yihiin Freeman Field Army Airfield Museum iyo Matxafka Fort Vallonia. Taariikhyahannada taariikhda gasha ayaa geli kara doorka Jackson County uu ka ciyaaray Tareenka dhulka hoostiisa mara, kaas oo ka caawiyay addoommadii baxsaday inay gaaraan xorriyadda. Waxa kale oo jira dhowr wadiiqo oo taariikhi ah, buundooyin daboolan, iyo maqsinno wareegsan oo loogu talagalay martida inay ku raaxaystaan.
Fannaaniinta jecel ayaa ku raaxeysta
Dadka jecel farshaxanka waxay ku raaxeysan doonaan booqashooyinka lagu soo uruurinayo noocyada kala duwan ee farshaxanka ee Degmada County Xarunta Koonfurta Indiana ee Farshaxanka, Ururinta Farshaxanka Swope, iyo Sanduuqa Brownstown ee Farshaxanka dhammaantood waxay gacan ka geystaan ​​dhaqanka aagga. Soo-booqdeyaashu sidoo kale waxay ka qayb-geli karaan bandhig ka socda mid ka mid ah tiyaatarada bulshada waxayna u safri karaan waddada farshaxanka si ay u arkaan farshaxanno badan oo maxalli ah.
DAAWO MUUQAAL FANKA
madadaalada bannaanka ugu fiican
Kuwa jecel xamaasadeena dibada, Degmada Jackson waxay siisaa dhowr fursado madadaalo. Qaxootiga duurjoogta ah ee Muscatatuck waxay siisaa ugaarsi, kaluumeysi iyo daawashada shimbiraha. Hadday ahaan laheyd dhulka loo yaqaan 'Jackson-Washington State Forest', Aagga Madadaalada Gobolka ee 'Starve Hollow Recreation' ama Hoosier National Forest waxaad u dooran kartaa kaamam ku habboon xaquuqdaada-iyo-ka-baxda guriga. Baaskiil wadista, socodka iyo fardooleyda waa siyaabo caan ah oo loogu tamashleyn karo aagaggan aan la taaban, maadaama ay ku fidaan boqollaal kun oo hektar. Soo-booqdaha u janjeera xagga isboortiga, waxaan sidoo kale bixinnaa golf-fiican.